चौबिस घण्टा नाँचेर अमेरिकाको रेकड तोडेका १३ नेपाली कलाकारले फेरि २७ घण्टा नेपालमा नाँचेर देखाउने घोषणा(भिडियो सहित) « Kalakhabar
देशभर आज मौसम बदली हुने
वामदेव गौतम विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दायर
नेपालमा आज ११५४ जनामा कोरोना पुष्टि
सार्बजनिक यातायातमा ब्रम्ह्लुट,यात्रु मर्कामा,सम्बन्धित निकाय मौन
ठुलो नेतालाई झापड हान्ने भन्दै नेकपाको बैठक कक्ष पेरिसडाँडा पुगेका बालिका खड्का पक्राउ
शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयको व्यापार,विद्यार्थीलाई अल्मल्याएर चर्को शुल्क असुल्दै
चौबिस घण्टा नाँचेर अमेरिकाको रेकड तोडेका १३ नेपाली कलाकारले फेरि २७ घण्टा नेपालमा नाँचेर देखाउने घोषणा(भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : शनिबार, ११ माघ २०७६ ११:२४
कलाखबर संवाददाता,११,माघ काठमाण्डौं । लगातार चौबिस घण्टा अमेरिकामा नाँचेर नेपालको पहिलो ईतिहास कायम गरेका १३ नेपाली कलाकारले फेरि २७ घण्टा नेपालमै नाँचेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली मौलिक कला सँस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउने उद्देश्यले डिल बहादुर मगर ९डिकेश० को नेतृत्वमा १३ जना नेपाली कलाकारहरुले लगातार २७ घण्टा सामूहिक मौलिक लोक नृत्य प्रस्तुत गरेर ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’मा नाम लेखाउने घोषणा गरिएको छ । आगामी फागुन २२ गते काठमाडौंमा विहान ९ बजे उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको हो ।
शुक्रबार मारुनी मिडिया नेटवर्कले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विश्व किर्तीमानीबारे जानकारी गराएको छ । उक्त किर्तीमान राख्नको लागि गिनिज बुकले अनुमतिसमेत दिईसकेको आयोजकले बताएको छ । कार्यक्रममा उक्त किर्तीमानी राख्नको लागि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको गिनिज ईभेन्ट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष लामाले कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिए । उनले भने,‘कार्यक्रमको राम्रो तयारी भएको छ ।
यो नेपालको परिवेशमा पनि विशुद्ध नयाँ रेकर्ड हाँसिल हुने हामीले अपेक्षा लिएका छौं । व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि धेरै राम्रो तयारी भएको छ । हामी टिमवर्कमा विश्वास गर्छौं । पत्रकार सम्मेलनकी प्रमुख अतिथिसमेत रहेकी चर्चित लोकदोहोरी गायिका राधिका हमालले पनि विश्व किर्तीमानी कायम गर्नको लागि सामूहिक नृत्यमा सहभागीहरुलाई शुभकामना दिएकी थिईन् । कार्यक्रममा मारुनी मिडिया नेटवर्कका प्रवन्धक डिल बहादुर मगर ९डिकेश० ले ‘देशले हामीलाई के दियो ?
भन्दापनि हामीले देशलाई के दियौं रु’ भन्ने मूल नाराका साथ आफूहरु विश्व किर्तीमानी राख्ने तयारीमा जुटेको स्पष्ट पारे । उनले उक्त उद्देश्यमा सफल हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया पनि दिए । उनकाअनुसार सो विश्व किर्तीमानी कार्यक्रममा नेपालको मौलिक गीत–संगित, भेषभुषामा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ । समारोहको उद्घाटन भने देशका विशिष्ट व्यक्तिहरुले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यसअघि सन् २०११ अक्टोबर ३१ मा अमेरिकाको एम.टि.भि.ओ. म्युजिक अवार्डको नाममा १३ जना युवायुवतीले लगातार २४ घण्टा १ मिनेट सामूहिक नृत्य गरेर विश्वकै सबैभन्दा लामो सामूहिक नृत्यको विश्व रेकर्ड राखेका थिए ।
अमेरिकाको नाममा रहेको यसअघिको रेकर्ड तोड्न र नयाँ रेकर्ड राख्ने प्रयासस्वरुप मारुनी मिडिया नेटवर्कमार्फत १३ जना नेपाली युवा युवतीद्वारा सामूहिक नृत्य गर्ने घोषणा गरिएको हो । सामूहिक नृत्यमा सामेल हुनेहरुमा डिल बहादुर मगर ९डिकेश०, केश बहादुर पुर्जा, शात्ना तिलिजा, सरला तिलिजा, शिक्षा गर्बुजा, अंशु गर्बुजा, चन्द्रमाया गुरुङ, जस्टिना श्रीस, सुस्मिता गुरुङ, शान्ति शाही, यमुना रोका, सञ्जु पुन र राजिन पुन रहेका छन् ।
कलाखबर संवाददाता,६ असोज–काठमाण्डौं । देशभरको मौसम मंगलबार सामान्यतया बदली भइ केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना
कलाखबर संवाददाता,५असोज–काठमाण्डौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर
कलाखबर संवाददाता,५असोज–काठमाण्डौं । नेपालमा आज थप ११५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य